Xilliga Mareykanka shaacinayo xayiraadda siyaasiyiinta | KEYDMEDIA ENGLISH
Xilliga Mareykanka shaacinayo xayiraadda siyaasiyiinta
Xayiraaddu, kaliya, ma quseyso socdaalka Mareykanka, hayeeshee, shaqsiyaad Soomaali ah, oo la rumeysan yahay in ay ku jiraan kuwa hadda madax ah ayaa sidoo kale u socdaali doonin waddamada xulufada la ah Washington.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xogo hor leh, ayaa ka soo baxay, xayiraadda fiisaha ee Dowladda Mareykanku saartay shaqsiyaadka muddada caqabadda ku ahaa hirgalinta hannaanka doorashooyinka Soomaaliya.
Ilo loo qaateen ah, ayaa sheegaya in durba si gaar ah shaqsiyaadka xayiyaadda la saaray loo gaarsiinaayo warbixinta cunaqabateynta viisaha iyo socdaalkooda, ka hor inta aan si buuxda loo shaacin dhamaadka bishaan.
Xogoha soo gaaray Keydmedia Online, ayaa sheegaya in Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, ay baahin doonto liiska ay ku qoran yihiin shaqsiyaadka la xannibay, marka la soo af-meero doorashooyinka Baarlamaaka.
KON, ayaa hore u baahisay in US, magacyada shaqsiyaadka xariraadda la saray u gubisay dalalka, Djibouti, Italy, Norway, Kenya, Qatar, Sweden, Turkey, UAE, Uganda, iyo UK, kuwaas oo ku qasban in ay qadaan jidka Mareykanka.
Ku dhawaad 50 ruux oo Madax, Siyaasiyiin, Saraakiil, iyo Qoysaskooda, ayaa ku qoran liiska shaqsiyaadka la cunaqabateeyay, kadib markii lagu fashilmay in geeddi-soodka doorashooyinka la soo gabagabeeyo 25-kii Febaraayo.
Shaqsiyaadka la beegsaday, ayaa la rumeysan yahay in ay ugu horreeyaan, horjoogayaasha kooxda waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo iyo Fahad, halka ay qeyb ka noqon karaan madaxda maamullada iyo siyaasiyiin kale oo caan ah.